Mosh oo ka mid ah Hiliblayaasha Sonkorta Martech Zone
Mosh oo ka mid ah Sonkorta Sonkorta
Isniin, Oktoobar 9, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Waxaan qaadanayaa nasasho loo baahan yahay caawa. Waxaan usbuucyo toos ah u shaqeynayay weyna ila socotaa.
Ma jecli inaan ku qoro cusbooneysiinta boggeyga, had iyo jeer waxaa jira wax aan bartay maalin kasta oo aan ku raaxeysto wadaagista. Waxaan horeyba u qoray fikradayda ku saabsan Youtube iib, waxay umuuqataa in taasi run noqotay!
Waa inaan idhaahdaa waxay ahayd fariin diris ah inaan arko in ka badan kala badh cuntadayda oo leh farriinta iibka maanta. Runtii ma muhiim baa? Hubi inay tahay lacag aad u tiro badan… laakiin waa maxay sababta oohs iyo aahs?
Sikastaba, wiilkaygu wuxuu la baashaalay qoob ka ciyaarka Sonkorta Sonkorta waxaanan doonayay inaan idinla wadaago! Isaga, dabcan, ma qorin tan… laakiin wuxuu kadhigtay mid isaga u gaar ah, isagoo ciyaaraya lakab walba iskuna qasaaya. Ku raaxayso!
Booqo Bill's site inuu dhagaysto 'fasalkiisa' kale!
Shil… maya foo-foo fadlan.
Oktoobar 9, 2006 at 8:55 PM
waxaad tahay halyeeygey, aabe!
Oktoobar 10, 2006 at 5:39 PM
Kama hadleynin bartaada internetka… waxay u badan tahay inay ahayd 100 ka mid ah 160 ka mid ah quudinta aan aqriyay ay ku jirtay Google News. Aad ayey u xun tahay in qof uusan u dhisi karin 'deduplicator' Akhristayaasha News ku saleysan Ingiriisiga!
Waxaan kaa rajaynayaa inaad, ku xidho xiriiriyeyaashaada Google. Waxay ahayd dhammaan boggaga tiknoolajiyada ee la soo dhejiyay ee ii waday nuts!